Historical Development of Railways ruo taa Turkey | RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraHistorical Development of Railways elu taa na Turkey
11 / 11 / 2019 06 Ankara, Central Anatolia Region, Usoro okporo ụzọ okporo ụzọ, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, Isi akụkọ, Turkey
akụkọ ihe mere eme development ruo taa toki ụzọ ụgbọ okporo ígwè
Akụkọ banyere ụzọ ụgbọ oloko bidoro ịrụ ọrụ azụmaahịa na 1830; O kpughee usoro nke na - akpụzi ụwa nke ugbu a. Ọ bụrụ na anyị elee akụkọ banyere okporo ụzọ ụgbọ oloko n'ime ụwa, ọ ga - ekwe omume ịhụ nnukwu mmetụta ụwa.
Mmepe nke netwọala kachasị mkpa na Europe, mmetụta nke teknụzụ Britain, ịmepụta usoro ndị buru ibu na India na ọtụtụ mgbe e mesịrị na China, yana iwu nke transcontinental na United States; ka ụzọ okporo ụzọ si etolite, bụrụ ọsọsọ, mfe karịa ma dịkwa nchebe. A na-ahụ etu ihe ndị a sirila gbanwee ndụ ndị mmadụ yana mmadụ mgbanwe ole ọzọ sụrụ ọsụ ụzọ. O doro anya etu ụzọ ụgbọ oloko si enyere aka kọọ ụwa anyị bi na ya na etu o si eme ka mmepe na mgbanwe dị na mba niile. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ụzọ ụgbọ okporo ígwè bụ ụwa 19. N'agbata nkeji iri na otu na nke ikpeazụ nke narị afọ nke iri na itolu, ọ tụgharịrị site na ọnọdụ ebe ọ na-esiri ndị mmadụ ike ịhapụ obodo ha ma ọ bụ gafere ahịa obodo nso, ebe enwere ike imeri kọntinent n'ime ụbọchị ole na ole kama ọnwa.
Traingbọ ahụ na-aga n’iji magnetism, na-amalite n’ọkụ ọ na-enweta n’ọkụ. Mpepe ụgbọ ala na - eme ka ụgbọ elu ahụ dịkwuo ngwa ngwa, na - amụba ọrụ na arụmọrụ nke ụgbọ oloko. N'ebe ebe teknụzụ ụgbọ elu dị ọsọ rutere, mmekọrịta nke ọdụ ụgbọ ala na ụgbọ ala ndị nwere ụkwụ na-amalite na mbido njem ahụ wee kwụsịrị na njedebe njedebe. Ndị njem na-achọ njem ngwa ngwa na ntụsara ahụ na-agbanwe mmasị na mmasị ha. Uru nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị na njikọ njem na-eme ka uru nke ụzọ ụgbọ elu dịkwuo elu.
Ndị Anatolia zutere n'okporo ụzọ ụgbọ oloko na 33 afọ mgbe afọ 1856 gachara iji ụgbọ mmiri ikuku na-eme ihe na nke mbụ n'ụwa. 23 Septemba Mepụta nke eriri İzmir Aydın na 1856 abụrụla ihe dị ịrịba ama na ịkpụzi ụdị mpaghara a, ọdịnala na akụnụba.
1986 na 2018 Railways
N’oge 1923-1950, nke echere n’ọdụ ụgbọ oloko dịka amụma obodo, e wuru ngụkọta kilomita nke 134 nke ụzọ ụgbọ elu, nke nkezi XkmX kilomita kwa afọ. N’oge a, a na-ahụ ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị ka ihe mmeghari ohuru nke metụtara mmepe na mmepe.
Movezọ ụgbọ okporo ígwè na mmalite nke Republic ga-ezughị ezu ma ọ bụrụ na ewere ya dị ka ntinye ụgbọ njem. Otu n’ime ihe atụ kachasị dị iche na otu esi ebuga njem na-agbanwe ọha n’obodo a bụ oge ụgbọ elu Turkish.
N'iburu n'uche oge a, ihe omumu ugbo ala, ulo akwukwo, ulo ndi mmadu, ndi dibia, ndi egwuregwu, ndi ulo obibi ha; n'eziokwu, a ga-ahụ gburugburu a iji mee ka ọha mmadụ gbanwee.
N’oge ahụ, okporo ụzọ ụgbọ oloko bụ mmeghari mmepe, mkpokọta nke ụgbọ njem, ihe mmeghari nke ọhụrụ yana ọrụ nchekwa na-enweghị aha maka nsonaazụ na ihe ngosi ndị anyị kpọtụrụ aha.
O di nwute, oru ngo a na –adabere n’elu okporo uzo ka ejiri nwayọ kpuchie 1946 na mgbe emesiri 1950, site na nsonaazụ nke oge oge, rue afọ 2003.
Site na 1951 ruo na njedebe nke afọ 2003, ebe atumatu iwu maka njem njem na-ebute site na mgbe Agha Secondwa nke Abụọ buru ụzọ ma nwee nsogbu oge, a na-eleghara ụzọ ụgbọ oloko anya kpamkpam ma naanị ụgbọ okporo ígwè 945 kilomita.
N'ime afọ 2003-2004; atumatu atụmatụ ulo oru di nkpa ka emejuputara n'ọdịnihu, ma edobe atumatu itinye uchu n’okporo uzo ugboigwe.
N’agbata afọ 2004-2018, e wuru kilomita kilomita nke 138 nke ụzọ ụgbọ elu, na nkezi XkmX kilomita kwa afọ. A na - arụzi ụzọ ụgbọ okporo ígwè 1.983 kilomita dị ugbu a.
Mba anyị amalitela naghachi mkpa ọ dị na njem ụgbọ oloko na itinye ego ya na ya n'otu oge ọkachasị na 16 afọ gara aga. N'ilekwasị anya na ebumnuche 2023 anyị, mbọ anyị na-amịpụta mkpụrụ ugbu a.
1856-1920 / 1923 Oge Ottoman; Ihe-nketa a sitere na Republic of 4.136 kilomita nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè.
Railways locomotive na-eje ozi dị ka ntọala na mmepe usoro ke Republic of Turkey, mgbe afọ nke nleghara anya 50 si 2003 afọ na-enwe ya ọlaedo afọ dị ka ọ bụ ebe mbụ afọ nke Republic. Ihe dị mkpa enyere okporo ụzọ ụgbọ elu egosila onwe ya na atụmatụ itinye ego iji mezuo ebumnuche 2023. Kemgbe 2003, 91,4 Billion TL emefuola na ngalaba ụzọ ụgbọ oloko.
Turkey nke na-agbakwụnye na-agba na-agba nke na-arụ elu-ọsọ okporo ígwè oru ngo kwụpụ site nzọụkwụ; Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Kon-ya, Konya-Eskişehir-İstanbul okporo ụzọ ndị na-agba ọsọ agbaala ma mepee maka ọrụ.
Site na Baku-Tbilisi-Kars Railway na Marmaray / Bosphorus Tube Cross, a na-etinye ụzọ ụgbọ okporo ígwè Ọgbara ọhụrụ ugbua ma ụzọ ụgbọ elu Asia-Western nke Europe dịpụrụ adịpụ na-arụ ọrụ.
Marmaray 2013, ụgbọ njem ụwa pụrụ iche, nke e jiri teknụzụ ọhụụ na nke na-eguzogide ala ọma jijiji kachasị elu enwere ike, gbanwere akụkọ ihe mere eme nke Istanbul ma tinye ya n'ọrụ maka ndị anyị.
Ankara-Istanbul na Konya-Istanbul YHT 2014, nke eji otutu uzo eji wuo ulo, etinyere n’ozi. Ya mere, isi obodo nke obodo anyi jikọtara onwe ha site na YHT.
Kemgbe 2003, 538 km ọzọ usoro ahịrị na ụzọ ụgbọ oloko dị elu nke 1.213 km na etinyere ụgbọ elu mba anyị abanyela na 12.710 km.
Ogologo ụgbọ okporo ígwè (Km)
ot ot ot Nkụzi Ọdịdị Dị Elu Ego niile
(Sina isi) Ahịrị mkpokọta edoghi ogologo
Mara: Thezọ ụgbọ oloko a na-agbagha agbagha ma rụkwaa nke 233 km agunyeghi na laini okporo ụzọ.
Ankara-Sivas, Ankara-Izmir High Speed ​​na Bursa-Bilecik, Konya-Karaman-Nigde (Ulu-barracks), Yenice-Mersin-Adana na Adana-Osmaniye-Gaziantep High Speed ​​Railway መስመር na-arụ ọrụ.
Ji ụgbọ okporo ígwè tracks, na mkpa, sleepers, fasteners amị ụlọ ọrụ malitere guzosie ike Turkey na malitere mmepụta na ogbo nke mmejuputa iwu-nke mba mmepe oru ngo n'ókè.
Egeray / İzban, nke na-enye ọrụ njem ụgbọ ala n'etiti İzmir na 2010; Enyerela oru a dika ihe nlere bu ihe nlere anya n’uwa n’etinye aka n’etiti ndi gọọmentị etiti na ndi oha obodo.
Na mgbakwunye na ihe owuwu ụzọ ụgbọ okporo ígwè ọhụrụ, enyere ọrụ maka ngbanwe nke oghere ndị dị ugbu a ma na-amalite mkpọsa nke okporo ụzọ. Ndobe zuru ezu na ntughari ohuru nke uzo 11.497 nke eriri nke 10.789 km.
Mmezi zuru ezu na imeghari ohuru ogologo ụzọ ụgbọ okporo ígwè (Km)
Mmezi zuru ezu na Mmeghari ohuru nke Ogologo Railway Line
N'ihi ya; Site na ịbawanye ọsọ ụgbọ ala, ike usoro na ikike, njem ndị njem na nke ụgbọ mmiri aghọọla ahụ iru ala, dịkwa nchebe na ngwa ngwa.
Onu ogugu nke 12 nke ebe nlebara anya nke ihe omumu nke 9, nke na-aru oru na oru nkwadebe oru ngo n’ime mpaghara nwere ikike ibu njem zuru ezu, emechaala ma wuo nkeji 5 Mba anyị abịaruola nso ebumnuche nke imeziwanye njem njem site na ịnye njikọ nke mpaghara ụlọ ọrụ a haziri ahazi na netwọk ụgbọ okporo ígwè na ọdụ ụgbọ mmiri niile.
N’ụgbọ mmiri na-ebu ibu, a na-amalite ngwa ngagharị ụgbọ ala, a na-agbanwe ụgbọ njem site na ụzọ ụgbọ mmiri ka ọ bụrụ ọsọsọ, rụọ ọrụ karịa arụmọrụ. Taa, enwere ọrụ ụgbọ oloko mba na nke ụwa.
Emezigharịrị ndị njem ụgbọ ala na-adọkpụgharị, a na-atụkwasịwo YHT na ebe a na-adọba ụgbọala maka oge mbụ, enwetara ụgbọ okporo ígwè DMU na ọkụ eletrik na mmanụ ụgbọ ala ma na-arụ ọrụ.
Ọnọdụ ụgbọala (Piece)
YHT a dizel-kwadoro a dizel-kwadoro Arriki eletriki Diesel Array
Ọnọdụ ụgbọala (iberibe)
PASSENGER WAGONS WAGONS UGO
The a na-Ibe Ike -Person The a na-Ibe Ike-ton
Mbelata ụgbọ ala ndị njem ga-aga n'ihu na usoro ahụ ka ụgbọ oloko Electric-Diesel setịpụrụ ụgbọ njem na ụgbọ oloko mpaghara na ọrụ ime obodo, ọkachasị na ọrụ YHT.
N'ime usoro ihe eji arụ ọrụ nke ugbu a, etinyekwara ego itinye aka na akara ya ma nyekwa ikike ime ka ụzọ niile eletrikiiki ma mata ihe. Na 2002, ogologo ahịrị ahịrị signaled site na 2.505 km rue 5.534 km; Ogologo eriri oku site na 2.122 km abawanyele na 5.056 km.
Mịnịstrị nke ọgbụgba ọkụ (HHT + Mgbakọ) Ogologo ahịrị (Km) (1 October 2017)
HHT Conventional Line nwere akara mgba ọkụ
Site na usoro iwu nke na-eweta nnabata n'ime ụzọ ụgbọ okporo ígwè, ekewapụwo ụzọ ụgbọ okporo ígwè na akụrụngwa na ebugharị ma nyekwa ndị nwere ike ịnweta ụzọ ụgbọ oloko.
39 ejikọọla na ọdụ ụgbọ okporo ígwè site na larịị Tekirdağ-Muratlı na nke izizi.
Nmeghari ohuru nke ugboala na ọdụ ụgbọ oloko n’obodo ndị ahụ ka e mere ka ọ bụrụ etiti dọtara ma weta ndụ akụkọ ihe mere eme, ọdịnala na nke obodo.
Iji mee ka nchekwa okporo ụzọ dịkwuo elu, mgbada dị larịị na nrute nke ụzọ na ụzọ ụgbọ oloko ahụ si 4.520 gaa 2.909. Ndozi na-aga n’ihu n’ogwe nke ozo di ugbu a ma a na-achịkwa ọnụọgụ nke 1.045. A na-arụ ọrụ iji gbanye ọkwa 198 larịị ka ọ bụrụ ngabiga.
Ụzọ ụgbọ okporo ígwè si Ottoman ruo ugbu a
Onye isi oche ASO Özdebir: "Logistics Base Ankara…
Çorlu bụ onye na-arụ ọrụ maka mberede okporo ụzọ 'ọtụtụ ụzọ, ọ
2023 site na okporo ígwè ruo 13 puku kilomita
Ordu Boztepe USB Car Christmas Night Open Up To 01.00
Usoro Mgbasa Ozi Izipu Lee Ogologo Ogologo
Zọ ụgbọ oloko gburugburu ụwa
Ịhapụ ụgbọ okporo ígwè
Turkey ụzọ ụgbọ okporo ígwè
Turkey si n'ọdụ ụgbọ okporo akụkọ ihe mere eme
Railway Line Ogologo ọhụrụ na Turkey
Turkey si okporo ígwè netwọk
The mbụ ụgbọ okporo ígwè akara na Turkey